Gbasara anyị - Global ARCH
Ndi otu anyi n’azu
Eziokwu Banyere CHD / RHD
Heartbọchị Obi Worldwa
Ngwaọrụ Social Media
Ndi otu ndi otu anyi
Kọmitii Ndụmọdụ Ahụike Anyị
Akwụkwọ Akụkọ WorldBeat
Nkwupụta nke ikike
Global ARCH / gbasara Anyị
Ozi nke Global Alliance maka Rheumatic na Congenital Obi (Global ARCH) iji meziwanye ndụ zuru ụwa ọnụ na-ebute ọrịa obi na-amalite site na ime ka ndị ọrịa na ezinụlọ dị ike. Ndị otu bụ n'efu ma meghee maka otu ọ bụla na-elekọta ndị ọrịa na / ma ọ bụ ndị na-arịa ọrịa obi na ezinụlọ ha. Njikọ aka anyị na-eme ka òtù dị iche iche si n'akụkụ ụwa niile na-amụ ihe, na-emekọ ihe ọnụ, ma na-ekwupụta ọnụ banyere mkpa na-enweghị isi nke ndị bi na nwata nwere ọnọdụ obi.
Anyị na-ejikọta ma na-ewusi ike ọrịa obi mgbawa zuru ụwa ọnụ na òtù ọrịa obi rheumatic site na ndụmọdụ ndị ọgbọ, mmepe onye ndu, akụrụngwa agụmakwụkwọ, na ọgbakọ mpaghara na ụwa.
Anyị na-ekwu okwu maka ikike nke ọrịa obi na -efe efe na ndị ọrịa ọrịa rheumatic site na anyị Mgbasa Ozi Ikike na site n'ịkwalite na ịkwado nkwado ndị ọrịa na ndị ezinụlọ
Anyị na-akụzi ndị ọrịa, ndị ọkachamara na ndị otu na -ahụ maka ọdịmma mmadụ na mkpa ụwa niile nke ọrịa obi amụrụ na ndị ọrịa ọrịa rheumatic na okwu kacha mkpa n'obodo anyị.
Anyị na-emekọ ihe ọnụ ya na ndi oru okacha amara na ndi mmadu ka ha kwado oru ndi di nma nye ndi nile oria obi na-amalite.
Global Alliance for Rheumatic na Congenital Obi (Global ARCH. Ha na-ekerịta ọhụụ nke ịgbanwe ọrịa ọrịa congenital zuru ụwa ọnụ na nsonaazụ ọrịa ọrịa rheumatic site na inye ndị ọrịa na ndị otu ezinụlọ aka.
N'oge ọkọchị nke afọ 2017, ha chịkọtara nke mbụ Nzukọ Ọchịchị Obi Ọgbakọ nke Mba Nile (ICHLS), nke chịkọtara ọrịa obi mgbapụta mmadụ iri atọ na ndị isi ọrịa obi rheumatic na -anọchite anya mba iri abụọ na otu na kọntinenti isii. Iji mepụta olu siri ike n'aha ọrịa obi mgbawa na ndị ọrịa na ọrịa obi rheumatic, ndị sonyere kwenyere n'otu olu wee guzobe ọgbakọ ọhụrụ na-anaghị akwụ ụgwọ onwe ha akpọrọ Global Alliance for Rheumatic and Congenital Hearts (Global ARCH). Ọhụụ mkpokọta maka Global ARCH bụ imeziwanye na ịgbatị ndụ nwata ọ bụla nwere obi toro eto na okenye - n'agbanyeghị ebe a mụrụ ha.
Kwuo na twitter
Global ARCH na -echikota ndi otu sitere na gburugburu uwa imuta, imekorita, na ikwu okwu n’otu gbasara enweghi ike igbo mkpa nke ndi bi na nwata na-amalite ime obi.
Global ARCH bu oke ruru ulo oru 501 (c) (3)